Hazvibatsiri kana iwe uri muchengeti wakanyatsogadziriswa kana mubhadhadzi webhizinesi – nebatsiro re Twitter, unogona zvechokwadi kuunza zvinotungamirira munguva shoma. Munhasi makwikwi enyika, mapuratifomu akaita se Twitter kana Instagram anotaridzirwa kuti ane simba rakanyanya rekutengesa Chero Chero Marimi.
Եթե ​​դուք ցանկանում եք տեղադրել ձեր արտադրանքը, դուք կարող եք գտնել ձեր արտասահմանյան Twitter- ի շուկայավարման խաղը: Na zvinopfuura 300 mamiriyoni anoshingaira pamwedzi vanoshandisa, iyo ichakupa iwe usingaenzanisikwi ruvoko rwekugadzira mararamiro ako kumagariro evanhu.
2 Twitter- ը ՝ կապարի սերնդի համար
3.2 2. Ներկայացրեք Twitter- ում զրուցելու համար
3.3 3. Iva we Twitter- ը խնայեց կամ uchibvunza mibvunzo
4 Twitter Չաթների ժամանակացույցը
5.3 3. Ita simba rako
Twitter- ը ՝ կապարի սերնդի համար
Iwe unokwanisa kugoverana kana kupinda mharidzo ye Twitter kuitira kuti kuparidze kusvika kwehuwandu hwechikwata chako pa Twitter, icho chinogona kusimbisa bhizinesi rako duku munguva refu. Sezvaungave watoziva kare, mukutaura kwe Twitter, vatori vechikamu vakasiyana vanotaura pamusoro pehurukuro inowanzoshandisa uchishandisa hashtag yakasarudzwa.
Chimiro chayo chakasununguka chinokwezva vazhinji vevatori vechikamu vary munharaunda yavo. Nokupinda mumisangano yakasiyana, unogona kupinda mukutaura nevanhu vakakosha uye vanokurudzira vanogona kukubatsira kukura bhizinesi rako. Uyezve, nekugadzirira kukurukurirana, unogona kugadzira mararamiro pamusoro pe Twitter nekukwevera vamwe vatengi zvakare.
Hapana chakakunetsa pamusoro pekuti iwe hauna kutora mukana wekutaura ne Twitter kare. Եթե ​​դուք չեք ցանկանում, եթե ցանկանում եք օգտվել Twitter- ում, դուք ոչ մի անգամ չենք կապում Twitter- ի հետ զրուցելու մասին:.
Uyu ndiwo mutemo wegoridhe wekutora mukana wekutumira Twitter. Iwe haugone kuisa nguva yako inokosha kuburikidza nekungosangana nemhando dzekutaura dzisingabatsiri kune bhizinesi rako. Sezvo muzvinabhizimisi, iwe unofanirwa kuisa pfungwa pakutsvaga mhirizhonga dzinouya dzinoenderana nekambani yako.
Pane zvakawanda zvekushandisa uye kutaurira mazita kunze uko izvo zvingakubatsira iwe kutsvaga sangano rinouya. Զամբյուղներ, զույգեր, զույգերի օրագրեր, զրուցարանների սեղան.
Uyezve, iwe unogona kushandisa nguva dzose rubatsiro rwe Twitter Advanced Advanced Search kutarisa kumusoro kwekutaura kwakakosha. Yakafambira mberi tsvakurudzo inogona kukubatsira kutarisa machechi ari kutorwa nevatambi vanotungamirira. Iwe unokwanisa kutsanangura mamwe mazita e-akhawunti mu "Ժողովուրդ" chikamu chekutsvaga zvigumisiro zvako.
Twitter առաջադեմ որոնման սքրինշոթ
Zvakanaka, iwe unofanira kutanga nokupa mazwi anokosha mumutsara we "Բառեր" wekutsvaga kwekutsvaga. Mushure mekunge, iwe unogona kungoita zvigadziriswe zvishoma kuti uwane migumisiro yakakosha. Shandisai dzimwe dzenguva dzinofadza zvikuru dzekutaurirana uye uzviwedzere kukerenda yako kuitira kuti zvinhu zvitange.
2. Ներկայացրեք Twitter- ում զրուցելու համար
Mushure mokuzivisa zviitiko zvishomanana zvinouya kuGoogle, usangomhanyira muzvinhu. Tanga nekucherechedza դինամիկա dzinobatanidzwa munyaya ipi ye Twitter.
Iwe unogona kusangana nemakambani mashomanana akachengetwa zvakanaka pane izvi zvakare. Edza kuvhara mukati uye kutsvaga zvinokonzera kukurudzira zvine chokuita nekambani yako. Uyu mutungamiri panzvimbo yangu ichakubatsira iwe kunzwisisa nzira yekutora nhengo mu Twitter Twitter chat chat.
Somuenzaniso, imwe yenzira dzekutora dzaunogona kuwana ndeyekuti nokungwarira hashtag inoshandiswa nevatori vechikamu vakasiyana panguva yekutaura. Isu tose tinoziva simba rehthtag շուկայավարում: Izvo zvave zvichicherechedzwa izvo tweets ne hashtag inenge kaviri kubatanidzwa kupfuura ma tweets anowanzosina asina hashtags.
Ույեզվե, Twitter- ի զրուցարանների միջև հանդիպումներ են ունենում kungosimudzira bhizimisi rako.
Iwe haufaniri kumbonyadzisa kuzvidzora paunenge uchitaura nevamwe. Nokufamba kwenguva, iwe uchaziva kuti Twitter chat inoshanda sechirongwa kuti uwane mukana nevanhu vakawanda-kana kuti kugadzira mararamiro ako nenzira yakanatswa.
Ndine chokwadi chokuti սնկով mokucherechedza machechi mashomanana, iwe unonzwisisa simba rayo uye ungatanga kuvhara yako inzwi rehurukuro usati watanga kukurukura nevamwe.
3. Iva we Twitter- ը խնայեց կամ uchibvunza mibvunzo
Usave wakanyatsojeka uye unouya nemubvunzo chaiwo uye wakanyatsogadzirwa: Nguva dzose taura nezvesarudzo yakasarudzwa mu tweet yako uye inosanganisira kugadzirisa kwemuenzi / mubatanidzwa iwe uri kutaurirana naye.
Uyezve, usati wanyorera mubvunzo wako, unofanirwa kuongorora nokukurumidza. Kana mumwe munhu achangobva kubvunza mubvunzo iwoyo panguva yekutaura, saka iwe unofanirwa kuuya nechimwe chinhu.
Edza kugadzirisa mubvunzo wako nenzira yakadai iyo inofananidzwa nehurukuro. Uyezve, mibvunzo yako haifaniri kunge inonyadzisa Chero ipi zvayo. Kana uri kubvunza mubvunzo wakareba, iwe unogona kugara uchiuputsa mu tweet yakasiyana, seyo Q1.1, Q1.2, nezvimwe zvakadaro.
Kana iwe usina chakanaka chekutaura pamusoro peimwe mimwe mavara, zvino chengetedza kusarerekera kwematongerwe enyika. Usatumira chero chakaipa pamusoro pevadzidzi vako paunenge uchitaura nomumwe munhu. Uyewo, usatumira Chero chinhu chinokugumbura kana chinangwa chekutonga paunotumira tweeting. Iva wakazvidzivirira uye edza kuwana chimwe chinhu chinobudirira kunze kwekukurukurirana kwako.
Yeuka, iwe uripo kuti uwedzere mararamiro ako pa Twitter uye usingaiti gakava. Taura kuvonga kwaunoita kune vamwe panzvimbo uye upedze kukurukura nenzira yakanaka kuti usiye pfungwa dzekusingaperi kune vamwe.
Twitter Չաթների ժամանակացույցը
Pano pane vashoma Twitter Զրուցեր չհամապատասխանել այստեղ, քանի դեռ պետք է,
#VCBuzz- ը Twitter- ի ամենշաբաթյա զրուցն է @seosmarty- ի կողմից: @SanaKnightly, mutungamiriri we #VCBuzz anopa sumo pfupi,
Vhiki imwe neimwe tine muenzi mutsva uye nheyo mutsva inosanganisira chimwe chezvinhu zvizhinji zvekutengesa ինտերնետ: Vadzidzisi vedu vanogovana ruzivo rwavo, zvishandiso, mazano, zvidzidzo zvekare, nezvimwe: Mukuwedzera kune iyo #VCBuzz ine mharaunda yemusangano apo munhu wose anokwanisa kugovera pfungwa dzavo nekubvunza mibvunzo yakawanda nokuti isu tose tinoungana pano kuti tibatsirane! Kutungamira mitsva yedu yatinoshandisa http://twchat.com/ -Chinhu chepamhepo chepamhepo chakashandisirwa nzira yekuita kuti kutaura kwe Twitter kuve nyore uye kuve nyore kutevedzera.
#SocialROI ivhiki nevhiki Twitter Զրուցարան yakabatwa na @MadalynSklar uye inotsigirwa ne @ManageFlitter. @ katefrappell- Gadzira Mutungamiri paManageFlitter, inopa mhedziso ye #SocialROI chat:
#SocialROI yakatanga munaJanuary 2017 yeSocial Media Marketers, Vatungamiri, VaMabhizimisi Vepamabhizinisi uye ManageFlitter vatengi. Hurukuro inoshumira semusangano unokosha umo nyanzvi dzemabhizimisi, vatashanyi vakasiyana uye vanopa mugove vanogoverana pfungwa dzavo nemanzwiro pamusoro pezvimwe nyaya dzine chokuita neVanhu veMagariro evanhu. Vatori vechikamu havangotauri chete kugovana ruzivo rwavo, asiwo vadzidza zvakawanda mazano uye mazano kubva kune vezera ravo.
Միացեք #SocialROI zuva rimwe nerimwe 6pm EDT / 3pm PDT.
Tarra Jackson aka @MsMadamMoney ndiyo nyanzvi inozivikanwa mune zvemari. Anopa #CashChat kukurudzira vateereri munyika yose kuti vave nehukama hwakanaka nemari yavo. Tarra inoratidzirwa # 3 kun Vakuru veMatambudziko Ekutevedza Kutevera pa Twitter.
#CashChat ndeimwe yepamusoro yevashanu vhiki imwe neimwe inopindirana yemari yemari chats pamusoro pe Twitter. Vabatanidzwa nevashanyi rudzi rwemhinduro dzemibvunzo kubva kumubati, Tarra, achishandisa shanduko yepajw.org Twitter. Chinangwa che #CashChat ndechekubatsira vanhu kudzidza mazano uye mazano ekuvandudza kana kuwedzera mari yavo uye kukweretwa kwekwereti kwehutano hwakanaka hwehutano.
Միացեք #CashChat Vhiki յոգայի յոգայի kubva ku12pm ET.
#ChatSnap- ի միացումներ, թե ինչպես է Twitter- ը զրուցում Բոլորը Snapchat- ի մասին: Hurukuro yakatanga musi waChris 16, 2016, uye yakarposedza zvishoma kubva kunyika kubvira muChishanu 1, ikashandisa mazana evatendi vhiki nevhiki kuzokurukura nyaya dzakapoteredza Snapchat. Kristy akakoka kune 40 + vashanyi vanokosha kuti vabatane nekutaura kwake. #ChatSnap- ը rakanyorwa naHootsuite սեզոնային հեռուստաընկերությունների թոփ Twitter զրուցն է սոցիալական մեդիայի համար vatengesi kuti vatevere.
Bata #ChatSnap Chitatu chega chega paC2 pm ET / 11am PT.
Nokuva kushamwaridzana nevamwe vanhu vane mafungiro akafanana, unogona kugovera hurukuro dzakawanda uye kuziva խուսափել vanozotarisira vatengi nyore nyore. Paunenge uine Twitter chat, iwe unofanirwa kusarudza nyaya yakakodzera. Inofanira kuwirirana nevateereri vako uye kuvakurudzira kuti vatore chikamu muhurukuro. Izvi zvichakubatsira iwe kuumba nzvimbo yako yakasiyana վահանակ zvekugarisana nevamwe.
Uyezve, ichakurudzira vamwe vatori vechikamu kuti vataure newe kana vasina chokwadi. Nguva yavanoshanyira purogiramu yako, vachazoziva nezvebhizimisi rako. Sezvo kuitisa Twitter chat kunokwezva vamwe vanhu vatove vakabatana nemhizha yenyu, ichakupa mukana wakanakisisa wokuratidza mazvinhu / maitirwo enyu.
Haungati iwe chete unokwanisa kuwana veveri vakawanda pa Twitter, asi iwe uchawanawo mukana wekushandura veveri ava kune vatengi vako zvakare. Nemuenzaniso, heyi nzira yakakwana yekupinda mukutarisana nemitungamiri yako.
Bhizinesi rega rega rinoda kuvaka yavo yepamhepo nharaunda kuitira kuti ive nezvimwe zviitiko zvekuita mune ramangwana. Ita kuti vateereri vako vabatwe paunenge uchitaura navo kuburikidza nechikamu cheQ & A kana nokungotora vashanyi vashoma. Izvi zvinopa vateereri vako mukana wekutaura kune vanotungamira indasitiri nyanzvi uye kutaurirana nemumwe.
Nokuita Twitter chat, iwe unogona zvechokwadi kupa zvinhu zvinokosha kune vateereri vako nenzira yakakurumidza uye isina maturo. Ichakubatsirawo kugadzirisa mibvunzo yavo kana kusimbisa vatsigiri vako. Heino muenzaniso wakakwana wekubatanidza nharaunda yako pamwe chete.
3. Ita simba rako
Mushure memubatanidzwa mune dzimwe nhaurirano, iwe uchava nhengo inoshanda yevanhu ve Twitter. Iwe unogonawo kutanga kutumirwa kuti uve muenzi pane dzimwe nharo dze Twitter zvakare. Izvi zvingava zvakakosha zvikuru, kwete kungoita chimiro chako chechigadzirwa, asiwo chekuita iwe pachako.
Uyezve, unogona kugovera yako pfuma (mabhuku ebhuku, mabhizinesi, uye nezvimwewo) kune vamwe vachiratidza chimwe chinhu. Izvi zvichasimbisa huwandu hwehuwandu hwehupenyu hwako. Kana zvikaitwa nekuchenjera, izvi zvinogona kuita zvishamiso zvechinhu chako chemufananidzo pa Twitter.
Twitter- ում զրուցում են ichakupa chete iyo yakarurama yekukwirirana nekukwira kwema influencers. Mushure mokunge mavaziva, munogona kutamisa zvinhu mberi uye muve neukama husingaperi navo.
Iwe haugone kuva mutungamiri wekambani kana iwe usingagari wakarposedzwa nezvose zvinoenderera mberi maitiro. Yakawanda yevhiringidzi ye Twitter inobatanidza kana zvidzidzo zvemangwana kana rudzi rwemashure ari kuita zvinyorwa munguva ino.
Uyezve, kana iwe nguva dzose uchida kuramba uri pamusoro pemutambo wako, shandisai hashtag chekucherechedza kuti uwane zvinyorwa zvenguva-nguva zvine chokuita nezwi rekkuta kana kuti hashtag. Pane zvakawanda zvekugarisana nevanhu vanoteerera uye vanotora zvigadzirwa zvevatengesi vanogona kuita kuti basa rako rive nyore nyore.
Chinonyanya kukosha, chichakupa iwe usingaenzaniswi kuwana kuti uwane shoko kunze uko pamusoro pekasa rako. Zvakanaka, mabhizimisi maduku haawani mukana wekuve kunze uko kana kutsigira zviitiko zvemarudzi ose. Kunyange zvakadaro, kuburikidza nekugadzirisa kukurukurirana kana kubata rudzi rwakanaka rwevanhu vanopesana, unogona kusvika kune zviuru zvevanhu.
Zvose izvi zvinogona kukubatsira kukurudzira marimi ako pa Twitter kusvika pamwero mukuru. Iwe unogonawo kukwanisa kugadzira ukama-ne-umwe nevateereri vako uye ivo vanozokoshesa zvaunoedza kuburikidza nehap iwe wakatendeka mutengi pamwe chete. Iwe unogonawo kubatana nemamwe mabhuku anotungamira akadai.
Pankaj Narange ndiye mubatanidzwa we Socialert uye nyanzvi yehuwandu hwemagariro ehupfumi nekugadzirisa. Socialert inyanzvi yehutachi hutsvaga, kuitira kuti iwe uone nyore uye kutarisira basa re Twitter nekuda kwechikwata chako.